Ny tsiambaratelo indroa an'ny fianakaviana sahirana, Sandrine Destombes
Ny tsiambaratelo indroa an'ny fianakaviana sahirana, nataon'i Sandrine Destombes
Ho an'ny plethora an'ny mpitantara frantsay lehibe amin'ny karazana noir (ampiarahana amin'ny ahiahy), notarihin'i Kely kokoa o thilliez, manatevin-daharana ankehitriny, amin'ny fitiavana malaza be loatra, Sandrine Destombes. Mpanoratra vaovao iray handray ny kaontiny ao amin'ny Gallic noir.
Ary hanehoana an'ity bokotra ity. Ilay tantara momba ny tsiambaratelon'ny fianakaviana sahirana (mifanaraka amin'ny alalàn'ny alokaloka ao an-tokantrano izay mametaka ny tsirairay amin'ny fombany avy. Joel dicker o Shari lapena) mampahafantatra antsika io toe-javatra io izay mihidy indroa mihidy amin'ny mahazatra amin'ny tontolo milamina sy manelingelina. Ny tsy fitoviana mahazatra eo an-tanàna amin'ny maha-trano milamina sy ny fahafahany mitahiry aloka mampidi-doza indrindra dia mitarika antsika amin'ity tantara ity amin'ny fetra vaovao tsy ampoizina.
In-droa mba hahitana an'io fitaratra manodinkodina io izay nanodinkodinana ny marina sy ireo fieritreretana mahatsiravina indrindra momba izay mety hitranga dia hita taratra. Rehefa tsy iatrehana ny ratsy amin'ny fotoanany, raha ny fahavetavetana dia antenaina hanjavona fotsiny, amin'ny farany dia ny mifanohitra amin'izay no mitranga. Ary manana faharetana be ny ratsy ...
Amin'ny lafiny iray amin'ny fitaratra dia mandeha mihoatra ny roapolo taona lasa izay isika. Piolenc dia miatrika ny fitaintainan'ny fanjavonan'ireo mpirahalahy roa, Soléne sy Raphaël. Soléne ihany no hita, miaraka amin'ny fatin'izy ireo miaraka amin'ny teatra makabe an'ilay dragona masiaka indrindra. Ilay zazavavy manao akanjo fotsy, manondro ny fahadiovana sy ny tsy fananan-tena fantatry ny mpanao heloka bevava, izay nahafaly kokoa ny asany mahamenatra.
Mety hitovy io. Na angamba fitohizan'ny lovan'ny diabeta izany. Ny tiana holazaina dia hoe amin'ny fahavaratra milamina amin'ny taona 2018, miaraka amin'ireo zavona miparitaka taloha izay tsy misy olona te hanaitra dia manomboka manjavona indray ny ankizy sasany. Haingana dia haingana ny famotopotorana eo amin'ireo mpanao famotorana roa izay nampahafantarin'ny mpanoratra tamim-pahakingana, polisy iray izay tsy nahalala ny tranga teo aloha ary iray hafa izay mety hitarika azy any amin'ny làlambe nilaozana. Ny zava-drehetra hiezahana hitady izay rohy izay afaka manafoana ny vintana ary mamaritra ny antony mahatonga ny rohy mifandraika amin'ny lasa sy ny ankehitriny.
Mandritra izany fotoana izany dia mijery ny lavaka mangitsokitsoka i Piolenc ka lasa toerana voaozona. Angamba ny devoly ihany no nifidy na nafafy fotsiny, teo amin'ireo tanimbariny, tamin'ny voan'ny faharatsiana.
Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy misy azo avela hisokatra. Miantsoantso ny ain'ireo zaza vaovao ao anatin'ny fahanginan'ny tanàna iray gaga raha ny feon'ireo lasa dia manako ao anaty fikorontanana mahatsiravina.
Ny fihenjanana faran'izay mafy manodidina ireo fahazazana nangalarina tamin'ny fiainana, ny fahatsapana ratsy indrindra ho an'ny toerana iray ka mila mamafy fanantenana eo amin'ny fahatsiarovana notafihin'ny maizina. Izay ihany, na iza na iza manana ny rohy misy eo amin'ny lafiny iray amin'ny fitaratra sy ny iray hafa, dia izy angamba no tena mila zavatra tsy misy fantatra.
Azonao atao izao ny mividy ny tantara The Double Secret of the Lessage Family, ilay boky nosoratan'i Sandrine Destombes, eto:
Tags Vaovao amin'ny novela, Tantara foronina, Sandrine Destombes